Hayada MSF Bulgium oo walaac ka muujisay Shaqaalaheeda lagu haysto dalka Somaliya – SBC
Hayada MSF Bulgium oo walaac ka muujisay Shaqaalaheeda lagu haysto dalka Somaliya
Madaxa Hayada Dhaqaatiirta aan xuduuda lahayn ee Belgiumayaa sheegay inay walaac daran ka qabaan Afduubka Soomaaliya loogu haysto laba ka mid ah dhaqaatiirtoda oo dhawaan laga soo qafaashay xerada dhadhaab oo ku taala wadanka Kenya.
Warka walaaca shaqaalaha MSF waxaa uu imanaaya ka dib markii todobaadkii aan ka soo gudubnay Magaalada Muqdisho lagu dilay Labo ka mid ah shaqaalahooda oo ka shaqeynayay xafiiskood Magaalada Muqisho ee Caasimada Dalka.
Christopher Stokes oo ah madaxa qeybta dhaqaatiirta xuduud la aanta ah ayaa sheegay inay xilligan qiimeynayaan inay sii wadi karaan howlahooda ay ka wadaan gudaha wadanka soomaalia ka dib dilka loo geystay howlwadeenadooda oo ku howlan u samafalka dadka soomaaliyeed.
Sarkaalkan ka tirsan hayada MSF waxaa uu sheegay in ujeedkooda uu yahay inay taageeraan dadka ku dhibaateysan soomaaliya balse waxaa uu sheegay inaysan is qaban Karin inay howshooda wataan iyo in qaar ka mid ah shaqaalahooda qaarna la laayo qaarna la haysto afduub ahaan.
Hayada MSF ayaa sheegtay inay weli la yaaban yihiin sida ay ku dhacday in qof hubeysan uu qori la soo galo xaruntooda ku taalay Muqdisho islamarkaaisna uu rasaas ku furo madaxdii hayada MSF ee ka howlgaleysay Magaalada Muqdisho.
Sarkaalkan Hayada u hadlay ayaa sheegay in hayada ay diiday inay heshiiska u cusbooneysiiso ninka falka dilka ah geystay oo horey u ahaa sarkaal ka tirsan hayada kaasi oo lagu eedeyey inuu qaatay ama wax isdaba marin ku sameyay dawooyin hayadu keentay waana taas tan keentay in heshiiskiisa laga laabto.
Hayada MSF ayaa xilligan rajeyneysa in baaritaan dhab ah lagu sameeyo sidii ay u dhacday weerarkii lagu qaaday xafiiskooda muqdisho
Hayada ayaa dhinaca kale dareen ka qabta inay xoriyooda dib u helaan laba ka mid ah shaqaalahoda oo haween ah kuwaasi oo lagu haysto Gudaha wadanka soomaaliya